2016 Ikhalenda yeeNcwadi zeBantwana iiHholide kunye neZenzo
2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana
Iincwadi zeKhalenda zeNcwadi zeBantwana zeNcwadi eziHlangeneyo namaHholide kunye neMicimbi
Iincwadi zeBantwana kunye neNinzi kwiNyanga nganye yoMnyaka
Skrolela phantsi kwi-annotated directory kuzo zonke iikhalenda zenyanga zam 2016 zeencwadi zezingane. Uza kufumana iincwadi zezingane kuwo onke amabini, kunye namanqaku, onke ahlobene neeholide kunye nezinye iziganeko, kubandakanywa nokuzalwa kwababhali beencwadi nabantwana beemifanekiso, kwinyanga nganye yonyaka. Jonga kwakhona, phawula ikhalenda yakho uze ucwangcise ukwabelana ngeencwadi zezingane kunye nezingane zakho ngokuhlonipha ieholide ezikhethekileyo kunye nezinye iziganeko ngenyanga.
Ikhalenda kaJanuwari yeencwadi zeBantwana
I-JGI / Tom Grill / Iifoto zeBlue / Getty Izithombe
Fumana uNyaka omtsha ukuba uqale kakuhle ngeengcebiso zokukhulisa abantwana abathanda ukufunda, kunye neencwadi malunga nobusika kunye nekhephu, iMartin Luther Luther Day kunye ne-100 th Day of School, kunye nokuvakaliswa kwamabhaso amabhuku aphezulu. Bhiyozela imihla yokuzalwa kaJanuwari kaJacob Grimm, uCharles Perrault, uJulius Lester, uPat Mora nabanye.
Funda kabanzi - uJanuwari 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda kaFebruwari yeeNcwadi zeBantwana
Kuninzi ukugubha ngoFebhuwari, kuquka iNyanga yeMbali ye-Afrika yeMbali / iNyanga yeMbali yeMnyama, iNyanga yabathandi beThala leeNcwadi kunye noMnyaka omtsha waseNtshonalanga / uNyaka omtsha weLunar. Eminye imicimbi ekhethekileyo iquka: Usuku lwe-Groundhog, umkhosi weGreensboro Sit-ins, Usuku lwe-Valentine, kunye nosuku lokuzalwa lukaLangston Hughes, uLaura Ingalls Wilder, Mo Willems kunye nabanye abalobi kunye nabalingisi.
Funda kabanzi - Februwari 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
IKharityhulam yeKharityhulam yeeNcwadi zeBantwana
Ngomhla uya kuphuma ngokuqaqambileyo njengoko ukuzalwa kukaDkt. Seuss ngo-Matshi 2 kubhiyozelwa ezikolweni kuwo wonke amazwe aseMerika. Iminye imicimbi yeeKratshi ibandakanya: Iinyanga zeMbali zaBafazi, iNyanga yeRifa leMveli yase-Ireland, iNyanga yesiCwangciso seNkcazo, uSuku lukaSt. Patrick, iPasika kunye nokuqala kwentwasahlobo, kunye neentsuku zokuzalwa zikaKate DiCamillo, uChris Raschka, uEzra Jack Keats, uLois Lowry kunye UBill Martin Jr.
Funda kabanzi - Matshi 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda ka-Apreli yeencwadi zeBantwana
Inyanga ka-Apreli yiNyanga yeeNkondlo kwaye ndinezixhobo ezininzi kuni, kunye neencwadi zezingane zePasika, iiveki yeThala leThala leSizwe, Usuku lomhlaba kunye nosuku lwe-Day Day / I-Day Day ye-Children- El dia de los niños / El da de los libros. Ukubhiyozela umhla wokuzalwa kaHans Christian Andersen ngokufunda ngombhali kunye nosuku lokuzalwa lukaCoretta Scott King ngokufunda malunga neCoretta Scott King Book Awards kunye nabaphumeleleyo.
Funda kabanzi - Epreli 2016 Ikhalenda yeeNcwadi zeBantwana.
Kwangathi iKhalenda yeeNcwadi zeBantwana
NgoMeyi, sigubha imicimbi ekhethekileyo. Ezi ziquka: Iinyanga zaseMerika zeLifa leLifa leMveli, iNyanga yeencwadi zeLatino, inyanga yeSikolo yeeBeki, iVeki yeeNcwadi zeeNtloko, uLuku lweeMvana, uMhla woMama kunye neSuku loSikhumbuzo, phakathi kwabanye. Ababhali kunye neefotoli zeencwadi zezingane kunye nemini yokuzalwa kaMeyi ziquka uKadir Nelson noMary Pope Osborne.
Yiya kwiKhalenda yeeNcwadi zaBantwana kuMeyi ka-2016.
Ikhalenda kaJuni yeeNcwadi zeBantwana
Ngaphambi kwam uluhlu lwam eziganeko zeJuni, ndinike izixhobo zokufunda zasehlotyeni ukuba zikuncede ugcine abantwana bakho befunda ehlobo. Iziganeko zikaJuni ziquka iNyanga yeSizwe yoKhuseleko, uSuku lweNdalo yoBume, uLusuku lukaBawo kunye nokuqala kwesiqhelo sasehlobo. Kukho ezininzi zokuzalwa zikaJuni. Phakathi kwabalobi kunye neempomfa ngeentsuku zokuzalwa zikaJuni bangumlobi uJoyce Sidman, umbhali uCynthia Rylant kunye nabalobi kunye nomfanekiso-mfanekiso uMaurice Sendak no-Eric Carle.
Funda kabanzi - Juni 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda kaJulayi yeencwadi zeBantwana
Ndibandakanya iindidi zokufunda zasehlotyeni, kubandakanywa uluhlu lweencwadi kwixesha elihlukeneyo, ekuqaleni kwekhalenda yale nyanga. NgoJulayi, bhiyozela ngomhla we-4 kaJulayi, kunye neNyanga yeSizwe yeBlueberry, kunye neencwadi zezingane. Kukho ababhali abangaphezu kwabalishumi elinamabini kunye neendlela zokufundisa zeencwadi zezingane ngeJuni lokuzalwa, kuquka i-EB White, uBotrix Potter kunye no-JK Rowling. Ngaba wayesazi ukuba uHarry Potter unakho ukuzalwa kukaJulayi?
Funda kabanzi - Julayi 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana .
Ikhalenda ka-Agasti yeencwadi zeBantwana
Ekubeni isikolo siqala ngo-Agasti okanye ngasekupheleni kweAgasti kubantwana abaninzi, ndifake iincwadi ezinabantwana endizicebisayo ukuncedisa abantwana bakho bakulungele ukuqala kwesikolo. Iziganeko zango-Agasti ziquka uSuku loLondolozo lweNcwadi kaZwelonke, Usuku loNgcakazo lweSizwe / Usuku lokuzalwa luka-Orville Wright, Usuku lokuLingana kwaBafazi kunye nemihla yokuzalwa kaWalter Dean Myers, waseVirginia Lee Burton nabanye.
Funda kabanzi - Agasti 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda yeSeptemba yeeNcwadi zeBantwana
Iziganeko kule nyanga ziquka ukuqala kweveki yeeNcwadi eziViweyo kunye neNqatshelwe: Ukubhiyozela iNkululeko yokuFunda. Kwakhona iNyanga yokuThaliswa kweKhadi leThala leThala leNcwadi, kwaye ngoSeptemba 15 ngowokuqala kweNyanga yeRifa leNkcubeko yamaSpanishi. Usuku lweProtiot Day, Usuku lokuPhumla lwesizwe, kunye nemihla yokuzalwa kaPawulos Fleischman, uJack Prelutsky, uJon Scieszka, uRoald Dahl, uRobert McCloskey noTomie dePaola, phakathi kwabanye.
Funda kabanzi - Septemba 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda ka-Oktobha yeeNcwadi zeBantwana
Ukubhiyozela iNyanga yokuXhatshazwa kweSizwe yokuXhatshazwa, kunye nesiqingatha sesibini seNyanga yeRifa leNkcubeko yamaSpanishi ngo-Oktobha. Iveki YokuFunda, Iimfazwe Zeenkwenkwezi Zifunda Usuku kunye neHalloween ezinye zezinye iziganeko kule nyanga. Abo bazalwa ngo-Oktobha bazalwa babhala abalobi bencwadi kunye nabakhonkcoli uJeanette Winter, uElisa Kleven, uSteven Kellogg no-Eric Kimmel.
Funda kabanzi - Oktobha 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
Ikhalenda kaNovemba yeeNcwadi zeBantwana
Inyanga yokuThuthwa kweSizwe, iNyanga yesiNgisi ye-Alzheimer's, i-National American Indian Month Month, usuku loNyulo, uSuku lwezilwanyana, kunye nosuku lokubonga yizona ziganeko ezikhethekileyo kwinyanga ka-Novemba. U-Astrid Lindgren, iPD Eastman, uEd Young kunye no-CS Lewis baphakathi kwabalobi kunye neefoto ezizalwe ngoNovemba.
Funda kabanzi - Novemba 2016 Ikhalenda yeeNcwadi zeBantwana.
Ikhalenda kaDisemba yeencwadi zeBantwana
Ixesha lokubhiyozela iiholide zasebusika: iKrisimesi, iHanukkah ne-Kwanzaa. Kwakhona lixesha leencwadi zemifanekiso malunga nobusika kunye nekhephu, iindaba zebusika kunye nokunye. Abanye babalobi kunye nemifanekiso yokuzalwa ngeDisemba yiJan Brett, uMary Norton, uEBLewis, uJerry Pinkney noEva Bunting.
Funda kabanzi - Disemba 2016 Ikhalenda yeencwadi zeBantwana.
'Iingoma ezingama-80 zeeNgqungquthela zoBonke-abafazi bama-80s Rock Band The Bangles
Iincwadi Ezinkulu ezivela kwiSikolo soPhulo lweeNkundla eziPhakamileyo zaseKolweni
Iincwadi ezilungileyo kakhulu zabantwana malunga neeOlimpiki
Iingoma eziPhambili zeeNcwadi zeBantwana
Uphando kwiiRekodi zeVital: Ukuzalwa, Ukufa kunye neMitshato
Izinto ezili-9 (Ngaphandle kwee Sharks) ezinokukubulala kuLwandle
6 Abagogo beGolf abaye balahleka ngokukhawuleza iMidlalo yabo
Umxholo wenkcazelo (isigama)
Amanqaku angama-5 aMaqumrhu aLwandle lweTyuwa